Kedu ihe omume a tụrụ aro kwa ụbọchị? - Mmega
Isi > Mmega > Omume a na-atụ aro kwa ụbọchị - azịza dị mfe maka ajụjụ
Kedu ihe omume a tụrụ aro kwa ụbọchị?
Omume ọ bụla dị mma karịa enweghị ọrụ, ma ọtụtụ ka dị mma. mee ihe ndi n’eme ka aru gi sie ike nke n’arụ akwara nile (ụkwụ, hips, azụ, afọ, afọ, obi, ubu na aka) ọ dịkarịa ala ụbọchị abụọ n’izu ụka. mee ihe dịkarịa ala minit 150 nke ime ihe ike kwa izu ma ọ bụ nkeji 75 nke ịrụsi ọrụ ike kwa izu.
Bob na Brad ♪♪ Abụọ Kachasị Ama ♪♪ Physiotherapists ♪♪ Na Ntanetị. (Egwu gwụrụ) - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp physiotherapist - Brad Heineck physiotherapist - Ọnụ anyị bụ ndị ọkachamara n'ihe ọmụmụ banyere ahụike na ịntanetị - N'echiche anyị n'ezie Bob - Nke a bụ n'ezie mmelite ederede, emelitere. Asaa omume ị kwesịrị ị na-eme kwa ụbọchị.- Right.- Kpamkpam.- Ee, anyị ga-ebelata ndị a.
Anyị nwere igwe okwu ka mma. Ọ ga - abụ obere ihe dị iche na mmemme ahụ.- Tupu anyị amalite nke ọma, ngwa ngwa.- Oh ee. - Ọ bụrụ na ị bụ ọhụụ na ọwa anyị, were nke abụọ iji denye aha anyị ma nyekwa Fit Index vibrating foam foam.
N'ezie ọfụfụ ụfụfụ na-akwụ ụgwọ maka ọnụahịa ahụ.- Right.- Nke a bụ n'ezie ọrịre.- Ọ nwekwara usoro ọmarịcha ịma jijiji, anyị hụrụ ya n'anya.- Ọ ga-abịarukwa na Facebook agbado elu nke ibe ahụ.
Ọ ga-amasị gị ụdị nke anyị? Gaa na Twitter na Instagram 60 sekọnd nke Bob na Brad kwa ụbọchị - masịrị ya ma ọ bụ na ọ bụghị, dịkwa mma. Ezigbo mma, anyị ga-amalite? - ka anyi bido - anyi choro ikwuputa na omume ndi a nile na akwalite ihe ndi mmadu na-enweghi obi uto - nke oma - n'ihi na anyi na-azu ahia di nso ma ha niile na-akwalite onu ogugu. - Ee.- Ma ọ bụrụ na ọ bụghị - Ọ dị oke mkpa maka ihe niile.
Ya mere, ka anyị buru ụzọ mee wrinkles a ma ama. Anyị ga-eme ha otu ahụ.- Onye ọ bụla kwesiri ime nke a kwa ụbọchị, n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile na-alụ ọgụ na isi a.- Yep.- Chin dara.
santa cruz anyịnya igwe maka ire
You chọkwara igosi otu ị ga-esi jiri osisi gosipụta ma ị na-eme ya ọfụma ma ọ bụ na ọ bụghị.- Right.- Anọ m na kọntaktị na Bum m, ubu m.
Ma mgbe isi m metụrụ aka, ana m ama na m nọ n’ọnọdụ dị mma. Anaghị m eme nke ahụ, m ga-alaghachi tinye ntụtụ m n'olu m na onye ọ bụla ga-eme ise na iri n'ime ndị a n'etiti. Nke a bụ nke ị nwere ike ịme oge ọ bụla. - Mgbe ị nwere ọnọdụ dị njọ ma laghachi azụ otu a, karịa ịlaghachi azụ, nke ahụ na-egosi na ị nwere ụzọ ịga. - Ziri ezi.
Ya mere, ọzọ na onye pụrụ mere taa enweghị nsogbu ọ bụla. Kwesighi ime iri n'ime ndị a ma ọ bụrụ na ị na-eme ha kwa awa ma ọ bụ karịa, mee naanị abụọ ma ọ bụ atọ na ya niile na-agbakwụnye nnukwu ncheta. Nke ọzọ dị mma ịnwe akwa nhicha akwa maka ya ma ọ bụ ịnwere ike iji aka gị.- Ee.- Youchọrọ igosi ha nke ahụ.- M ga-eme aka ahụ.- Ọ dị mma ma ị ga-enweta mpịakọta ma ọ bụ jiri aka gị n'olu , hapụ m nke m ebe a Wepụ iko.- Ya mere, ọ fọrọ nke nta ka m dị ka akụkụ ala ma ọ bụ ọbụna ọnyà elu.- Yup.- You nwere ike imetụ onwe gị aka.- Ihe kachasị mma ime bụ iji oche oche mee ya ka ị nwee ike zuru ike gị.
Ma Bob agaghị. Ọ ga egosiputa gị n’enweghị, mana oche dị obere mma. Anyị na-ebido obere agba wee tụgharịa ya.
Ihe omume ndị a niile ekwesịghị ịbụ ihe mgbu, ma ọ bụrụ na ha mepụta agba, ọ ga - abụrịrị nsogbu na ịgaghị eme ha. Ya mere buru n'uche onye ọ bụla. Ọ bụrụ na nke ọ bụla merụrụ ahụ, mafere nke a. - Brad na naanị m maara ya site n'oge gara aga site na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ọrịa dasqui Ọtụtụ mgbe, nke a bụ ntụziaka ndị mmadụ uko.
Ma mgbe ị na-arụ ọrụ na ntụziaka ahụ, ọ na - enyere aka ịkwaga n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụziaka niile.- Kpọmkwem.- Ya mere nke ahụ bụ onye ịchọrọ ide akwụkwọ ọtụtụ oge, ị nọ n'ihu ụbọchị ma ọ bụ isi ala, ịchọrọ ịnọ na nke ahụ na - aga na - abụghị ụzọ - wee mee ugboro ise na iri na ya.
Enwere ike ime nke a n'ehihie. Ma eleghị anya, ọ bụghị mgbe ọ bụla a na-adọrọ agba. - Aga m eme ya na W.
Mee W ebea ma piaji ubu ubu m. Ọ masịrị m n'ihi na ọ na-agbatị ma na-ewusi mọzụlụ obi n'otu oge. - Ziri ezi. - Ugbu a osisi booyah ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ọbụlagodi n'ihi na ị gbatịrị n'ezie.
Ọ na - akwalite ịgbatị - ọ dị mma - ma n'otu oge ahụ ị ga - enweta ume na ya. Yabụ, ọ bụ ụzọ dị mma iji gbatị ọnọdụ ahụ.- Ee, ọ bụ ụzọ dị mma iji gbakwunye ọnọdụ ahụ.- Cerfọdụ mgbakwunye.- Mgbakwunye ga-abụ okwu kwesịrị ekwesị? - Chọpụta.- Anyị nwere di na nwunye nke Bekee majors. - Ngwa, kedu maka ngwa? - Gaba.
Dịkwa mma. - Ọ dị mma, ndọtị na usoro Brad. Ekwesịrị m ịme nke a? - Eeh. - Yabụ dị mfe, ị dinara ala na afọ gị, aka gị n'okpuru ubu gị.
Ma ị ga-ebido ma eleghị anya naanị ọkara ịkwalite. Ihe dị mkpa ebe a bụ na ị naghị ebuli pelvis ma ọlị. - Bilie ike gị. - Ugbu a ị nwere ike ma ọ bụ mee nke a ma ọ bụrụ na ịnwee ma ọ bụ nwee spondylolisthesis, Brad? - Spondylolisthesis ma ọ bụ spinal stenosis azụ ebe a na mpaghara lumbar.
Nke a, anyị nwere mmemme ndị ọzọ ga - adị gị mma - Ee, mana ndị a dị oke mma maka igbochi mgbu azụ yana maka ọtụtụ mmadụ ha dị mma maka ịgwọ mgbu azụ - O doro anya, ee - Ya mere ana m eme nke a ọ bụla ụtụtụ.- Ee.- M na-eme nke ọma iri abụọ iji mee ihe n'eziokwu.- Na ị nwere ezigbo ngagharị.
You bụ? Afọ 60? - Enwere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60. - Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ - M na-akụ aka n'ọnụ ụzọ na June.- Enweghi ọtụtụ ndị nwere afọ 60 bụ ndị na-agbanwe agbanwe na azụ.- Nke ahụ bụ eziokwu.- Ihe akaebe na pudding.- M ' Anọla na-eme ya ruo ọtụtụ afọ.
Enwere m ọnọdụ a maka ihe kpatara Brad.- Ee.- Ee e, anyị ga-eme cat na kamel ugbu a.
N'ihi ya, m gbagọrọ agbagọ. Hulata m ala. Up.
A na - ebipụ Ab.Brad na - enweghị ike ịnụ ya na nke a bụ oge m na - enwu ebe a - oh ee. M pịa bọtịnụ nkwụsịtụ.
Echere m na m kụrụ ihe ebe ahụ. - Brad azụ azụ ahịa. - Ah, nke ahụ ziri ezi na ndị a dị mma ime ihe ruru iri n’ime ha. - Omume ọma na - arụ ọrụ na ngagharị nke ngịga ahụ yana yana ngagharị nke mkpụrụ osisi lumbar. - Cheta iku ume na ihe ndia niile.
Anyị kwesịrị ịkpọtụrụ nke a ozugbo, mana nke ahụ bụ ihe nchekwa ahụ dị, iku ume na izu ike. Na-esote, anyị ga-aga ụkwụ ụdọ. Aga m egosi ụzọ dị mma iji mee ya, Bob ga-eme ya dina.
Ha abụọ bụ ụzọ dị mma iji gbatịa. Ihe ọ bụla ị na-eme, mee ka ikpere gị kwụ ọtọ na azụ gị kwụ ọtọ. Ya mere aga m egosi gị na ị nwere ike iji mkpara ma ọ bụ osisi booyah nke na-eme m ka m mee ka azụ m kwụ ọtọ.
Enwee m ezi apata ụkwụ. Ọ bụrụ n’ịme ya otu a, ị chọghị ya. - wantchọghị ịgbagharị.- keep na-edebe ya n’ụzọ ahụ.
Gaa n'ihu, Bob, m ga - agbatị - Ọ dị mfe, ị ruru n'okpuru ikpere gị. N'ebe a n'apata ụkwụ, ị ga-agbatị ya. Dọọ ụkwụ gị n'akụkụ m dịka m nwere ike.
Ma dị ka ogologo dị ka m nwere ike. Na-eku ume. Aga m enweta peeji a kwa. - E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche iji gbatịa eriri ụkwụ.
Ma ndị a bụ ụzọ abụọ dị mma dị mma- Mykwụ m dị ogologo oge ị bụ Brad - Amaara m, lee nha ụkwụ ahụ. Tolitere n'abalị ụnyaahụ? - Echere m na m mere.- Ekwenyesiri m ike.
Rịba - Anara m ụra nke ukwuu - Ma aha ụdọ ikiri ụkwụ ahụ gbatịrị agbatị. E nwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi mee nke a. Ọ bụrụ na ị nwere bọọdụ mkpọda, echere m na ọ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ya.
Ma ọ bụrụ na ịnweghị ya nke ahụ dị mma. Achọghị nke ọ bụla. Bob ga-egosi gị.
Nwere ike ime ya na tebụl countertop. I nwere ike ịga ije n’elu mgbidi. Kwụ azụ dịkwa ebe mgbatị ahụ na-eme.
Kwụ dị n'ihu kwụgidere n'ebe ahụ. Na nke ị nwere ike ijide 15 ruo 30 sekọnd. Onwe m, achọrọ m itinye nrụgide ma wepụ ya.
Mana ị ga - ahụ ọtụtụ ndị na - ekwu na ị na - akwado nkwado maka 30 sekọnd. - Echere m na m gwara akụkọ ahụ. Banyere otu ọkacha mmasị m bụ Little Story of Reader's Digest.
Otu nwanyị gara runso, ọ dọba ụgbọala ya na ya guzo n'azụ ụgbọ ala n'okporo ụzọ a. - Ndi ụzọ a? - Ee, nwoke ọzọ bịara ma nyere ya aka nwaa ịkwanye ụgbọ ala ahụ. Achọrọ enyemaka.- Ọ chere na ọ bụ ụgbọ ala mebiri emebi.
O juru m anya oge ole o kwere ka o mee ihe a? - Aka nri, aka nri. Karịsịa mgbe ọ dị n'ogige ahụ - Ọ dị mma, ya mere gafee akụkụ asaa ndị a. Ọzọ asaa bụ ọnụ ọgụgụ magburu onwe .- Ọ bụ nọmba anwansi.- O zuru ezu, Bob.- Ọ dị mma, cheta, mụ na Brad nwere ike idozi ihe ọ bụla.- Ewezuga- Obi tiwara etiwa- Gaa n'ihu.- Anyị na-arụ ọrụ - Gbatịa (Music n'afọ iri na ụma)
Imega ahụ nkeji iri isii ọ ga-ezu?
'Ntuziaka 2005 jikọtara ihe a niile ma nụchaa ozi ahụ,' ka Bryant na-ekwu, 'na-ekwu na ị chọrọ ịgbalịsi ike ịbanye na yammega ahụdị ka ị nwere ike n'ọtụtụ ụbọchị: 30Nkejikaụbọchịọ bụrụ na ị bụ onye ịdị arọ nke anụ ahụ gị ma ịchọrọ naanị uru ahụike nke ịdị na-arụsi ọrụ ike,Nkeji 60...Sep 19 2005
Ihe Na - eme n’ahụ Gị Mgbe erc Na - egosipụta Nkeji 30 Otu ụbọchị Ọ na - esiri ike ịmanye onwe gị ịkụ mgbatị ahụ ma mee ihe niile a na-eme, mgbatị na mgbawa, mmega ahụ kwa ụbọchị zuru ezu iji mee ka ahụ gbasie gị ike na ọdịdị yana mgbe ị na - eche oke ike nke mgbatị ọ bụla na-ahapụ gị ma hụ nsonaazụ mbụ, ị ga-ahụ adịghị ike n'ime obi gị maka mgbatị ahụ. Ka anyị leba anya n’ihe ị ga-atụ anya n’ahụ gị mgbe ị mechara banye ma bido imega ahụ. You mara na mmega ahụ oge niile nwere ike ime ka ndụ gị dị ogologo.
Lelee isiokwu a ka ị hụ uru ndị ọzọ dị ịtụnanya nke mmega ahụ kwa ụbọchị kwere na anyị, mgbe ịlechara isiokwu a, ị ga-ahụ ọzụzụ na ọkụ ọhụrụ n'oge ọzụzụ.Usoro gị na-aga n'ọtụtụ usoro, nke mbụ, ọnụ ọgụgụ metabolism gị na-abawanye, ahụ gị na-ere ọkụ ọzọ calories, ya mere ọtụtụ ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị ghara iji nlezianya onwe gị onwe gị na-eri a Pizza ma ọ bụ a mpempe achicha ma ọ bụrụ na ị chọrọ, ma mgbe niile na-eme a ole na ole ọzọ omume n'oge gị ọzọ mgbatị ma ọ bụrụ na ị na-eji ya. Ọkpụkpụ ọbara gị na-emekwa ka nke a dịkwuo mma na mmega ahụ dị mfe ma dị ike. .Tzụ ọzụzụ na-eme ka uto nke arịa ọbara ọhụrụ na ikuku oxygen na-abawanye site na lita 8 na-emebu n'oge oge ezumike ruo 100 lita kwa nkeji. Nke a na-eme n'ihi na mọzụlụ gị na-arụsi ọrụ ike n'oge ọzụzụ na sistemụ gị chọrọ ikuku oxygen ọzọ iji gbaa calorie ume nke ọma.
Nrịbawanye ọbara na-enyere mkpụrụ ndụ aka ịnarakwu oxygen ma na-azụkwa onwe ha site na ọbara, ọ na-enwekwa mmetụta dị mma na ụbụrụ gị. Mkpụrụ ndụ na-emeziwanye ọrụ ha, yabụ ọ bụrụ na ị na-emega ahụ ma ọ dịkarịa ala obere ụtụtụ, ọ na-enyere aka ngwa ngwa ka ị lekwasị anya ma lezie anya ka ị nwee ike ịmalite mgbatị ahụ onye ọ bụla maara na inwe mmetụta mgbe ị gachara ezigbo mgbatị ahụ mgbe ike gwụrụ gị na Endorphins na-ebelata ihe mgbu ka ha na-arụ ọrụ nnabata pụrụ iche na ụbụrụ gị, ha nwekwara ọtụtụ mmetụta ndị ọzọ dị mma na ahụ na uche gị - ha na - enyere aka imeri ị addictionụ ọgwụ ọjọọ, ịlụ ọgụ nchegbu ma melite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ - ahụ gị na-amalite ịgbakwunye protein na carbohydrates ugboro anọ ngwa ngwa ka ị ghara ibu ibu ngwa ngwa Amaghị m banyere gị, mana m na-aga mgbatị ahụ ugbu a na ihe dị mma ime ozugbo mgbatị gị bụ mmiri oyi na-atụ oyi n'ụzọ dị otú a ị na-ebelata ohere ị nwere ịnwe awa ole na ole nke ụtụtụ echi ma ọ bụ n'oge mgbatị gị ọzọ mgbe ị gachara awa ole na ole mgbe ọbara mgbali gị gasịrị zes mgbe ị gụsịrị ọzụzụ na ị chọpụtala na mgbe ị zụchara ọzụzụ, ị ga-enwekwu obi ike n'onwe gị na ùgwù onwe gị na-akawanye mma, ị na-eche na ị nwere ike ịme ihe ọ bụla na mkpali gị na-abawanye, ọ bụghị ihe ijuanya na ị ka lanarị ọtụtụ crunches na akpa ume, agbanyeghị na ọ na-amụba ụbụrụ gị na-enyere gị aka ịrụ ọrụ nke ọma ị na-amalite ihi ụra nke ọma ka ụra ụra gị na-eme ka ị daa ụra ngwa ngwa ma teta n'ike n'ike ugbu a ị nwere ike ichefu ọtụtụ mbọ a na-apụghị ịgụta ọnụ imeghe anya gị n'ụtụtụ, ị ga-enwe ahụ iru ala ma bụrụ dị njikere maka mmalite dị mma ụbọchị ma ị kụrụ bọtịnụ ụra Ikwesighi, dịka ị nwere ike ịkọghị, ị ga-echere ọnwa iji hụ mgbanwe mgbanwe mbụ dị mma na-eweta na ndụ gị. Ọ bụrụ na ị gbalịsie ike ruo mgbe ị gachara, izu ole na ole ga-eme ka obi gị na obi gị dịkwuo mma na mgbe ị gachara mmega ahụ izu ole na ole Ọbara gị na-amalite ịrụ ọrụ nke ọma Ọfụfụ akpa ume gị ka mma, na-eduga mmụba ị na-enwe na ntachi obi gị, ka ị na-emega ahụ mgbe niile ị ga-echefu ihe dị ka mkpụmkpụ nke ume nke bụkwa uru nke nnukwu akpa ume na-ekwu okwu banyere nnukwu mgbanwe ndị ọzọ n'izu izu ọzụzụ na-eduga na nke gị Ọbara hemoglobin ọkwa na-emekwa ka ọnụ ọgụgụ ọbara ọbara dịkwuo mma sel ọbara kwa cubic millimita ọbara wee mụbaa site na nde ise rue nde isii nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ga-abawanye nrịba nke ogo lymphocytes n'ọbara na-abawanye, nke na-enyere ahụ gị aka ịlụso nje na nje dị iche iche ọgụ ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ nke ọma na ahụ gị na-achịkwa n'etiti ihe ndị ọzọ. , ọ na-ebelata ọkwa shuga na ihe ndị ọzọ dị n’ọbara n’ụzọ dị mfe kachasị ihe kachasị mma bụ na ahụ gị na-echekwa obere abụba na mgbakwunye, ọzụzụ oge niile na-eme ka ị sie ike, sie ike ma na-ada ụda nke ukwuu, ọ bụghị mgbe ọnwa ole na ole nke ọnwa ọzụzụ mgbe niile. nke ọzụzụ mgbe niile na-emetụta sistemụ gị Na ọkwa dị iche iche kpamkpam, nke mbụ, ikuku oxygen na akwara gị na-abawanye na microcirculation impro ves ọbara na-asọ, nke abụọ, ịhazi mmegharị gị na-emeziwanye, nke na - enyere gị aka iwusi sistem ụjọ gị ike, ọsọ nke akwara na ọnya ikuku na - abawanye, nke na - eduga na mmelite nke ụbụrụ ka ị wee nwee ike ịme mkpebi ọsọ ọsọ ma gharakwa egbula ma maa jijiji.
Ọ na - emekwa ka usoro ahụ dị n’ahụ gị sie ike ka ọkpụkpụ gị wee baa ụba, ị ga - enwekarị mgbakasị ahụ ma nwekwaa ike ịda mba na nkụda mmụọ. Imega ahụ na-agbanwekwa agwa gị nke ọma. Ikwesikwu ike ma sie ike.
Maka ụfọdụ ndị, mmega ahụ mgbe niile na-aghọ ọgwụgwọ. Ọ na - enyere aka ịhapụ mmetụta uche siri ike dịka ụfụ na iwe ma mee ka uche si na nsogbu na echiche ọjọọ niile pụọ. Thatdị ahụ, iji nwee ike ịnagide nsogbu dị ịtụnanya n'ihi na ọ na-eme ka ị sie ike n'ụzọ anụ ahụ na n'uche, ma ọ bụrụ na ọ dị ka ọ dị egwu na mbụ, mgbatị ọ bụla na-esighi ike ma na-atọkwu ụtọ karịa afọ ole na ole nke mgbatị ahụ oge niile, ewezuga Ihe doro anya bụ ọtụtụ afọ nke ọzụzụ na mgbatị oge niile na-eme ka usoro gị dịkwuo mma ma mee ka ị dịkwuo mma, ha na-emekwa ka ndụ gị dịkwuo elu. Nkwupụta a metụtara ụdị ọrụ ahụ ọ bụla ị na-eme n'oge gị n'efu. nnukwu onye mgbatị ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe ọ bụla ị hụrụ n'anya, dị ka ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ mepụta gị e Usoro mmemme gị nke ịchọrọ ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala anabataghị ma ọ bụrụ na ịnweghị mkpali ma ọ dabara na ị nwere enyi nwere ike ịdọpụ onwe ya can nwere ike ịnwale ịga mgbatị ọnụ iji kpalie ibe gị. razụ stay na-anọ ogologo oge karịa onye na-achọghị nke ahụ, na nyocha ndị ọzọ na-adịbeghị anya egosiwo na mmega ahụ kwa ụbọchị na-ebelata e mere agadi nke ụbụrụ.
Ntụziaka kachasị mma maka ịdị mma, ahụike na ịma mma, na-eme ka uche gị doo anya ma dị nkọ, yana ịkpa agwa dịka mkpebi siri ike na mkpebi siri ike bụ ọzụzụ afọ nke mgbatị ahụ kwa ụbọchị na-ada ụda dị egwu ugbu a, mana bido ma kwere anyị ma ọ bụrụ na ị hụrụ ihe dị iche ị gaghị akwa ụta maka ihe na-enyere gị aka ịkụ mgbatị ahụ na ugboro ole ka ị na-eme Tellus na nkwupụta ndị dị n'okpuru ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ndị ọzọ dị ka nke a, pịa bọtịnụ dị n'okpuru isiokwu ahụ ma kesaa ya na ndị enyi gị ma sonyere akụkụ dị Mma
Kedu ihe a na-atụ aro ka ndị okenye na-eme kwa ụbọchị?
Maka nnukwu uru ahụike,okenyekwesịrị ime ma ọ dịkarịa ala minit 150 (awa 2 na 30 nkeji) na 300 nkeji (awa 5) n'izu nke ike-agafeghị oke, ma ọ bụ nkeji 75 (1 awa na 15 nkeji) na 150 nkeji (awa 2 na 30 nkeji) izu nke ume siri ike-aerobicmmega ahụ, ma obu ihe nchikota nke
Ederede a mere ka edemede a kwe omume. Ọ bụ ihe ọ bụla na nzuzo - M hụrụ n'anya na-eme ụtụtụ, dị ka a mara abụba nwa ewu achicha, na ma eleghị anya, ị ga-kwa. Kama ịgwa gị usoro ụtụtụ ị ga - eso, ka anyị kọọ akụkụ ụfọdụ nke ihe na - eme mmalite ụbọchị ka gị onwe gị wee mepụta usoro ụtụtụ nke gị.
Dr. Jubbal, MedSchoolInsiders.com, a juru m anya.
N'ezie, ọ juru m anya na n'ụlọ akwụkwọ ọgwụ na ebe obibi m jụrụ ịwụ ụtụtụ, ọbụlagodi n'oge enweghị isi. Mgbe m na-awa ahụ rọba, m na-agakarị ụlọ ọgwụ n’elekere anọ nke ụtụtụ.
Imirikiti ndị ọrụ m gbakọrọ na akwa na 4: 10 am, tụba uwe ole na ole, wee pụọ n'ọnụ ụzọ ka ha banye ọmụmụ ihe n'oge na-abịa.
M tetara na 3 nke ụtụtụ, na-ewepụta oge m iji dọọ ụmụ m n'akụkụ ọdọ mmiri site na ike m na-eme ka ọ dị ike, na-ehichapụ ezé m, gbatịa, dee akwụkwọ edetu, na-atụgharị uche, na-eme ka protein gbanye iji dochie nri, gbanye igwekota m ma pụọ ​​n'ọnụ ụzọ site n'elekere anọ nke ụtụtụ ka m wee nwee ike ọ dịkarịa ala ịbanye n'ọmụmụ ihe 10 nkeji.
Dị ka ha na-ekwu, n'oge na-abịa n'oge na n'oge oge. Gịnị mere m ga-eji chụọ otu awa ụra maka nke a? Enwere m onye nzuzu ahụ nke ọma. Mana site na ịgbaso usoro ndị a na itinye usoro nke ụtụtụ nke gị, gị onwe gị kwa nwere ike ịnwe anwansi nke usoro ụtụtụ nke ọma.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ etu ụtụtụ m si eme ugbu a, ma ọ bụ ihe ụtụtụ m dị ka ụlọ akwụkwọ ọgwụ na ahụike, enwere m isiokwu nke abụọ na ọwa m si Kevin Jubbal, MD. Njikọ na nkọwa dị n'okpuru, tinye ekwentị mbụ ahụ. Nke a ga - abụ ihe kachasị sie ike maka ọtụtụ n’ime gị.
Mgbe ịmalitere ụtụtụ ịlele mgbasa ozi mmekọrịta, email gị, na ozi ọma, ị ga-egbochi ikike ịtọ ebumnuche maka ụbọchị gị. Nke a bụ ụzọ mmeghachi omume iji malite ụtụtụ kama ịmalite ịmalite, dị ka Tristan Harris, onye bụbu Google Design Ethicist, kọwara ya nke ọma. “Mgbe anyị na-eteta nke ụtụtụ na-atụgharị anyị ekwentị ịhụ a ndepụta nke ificationsma Ọkwa - ya okpokolo agba na“ kulie ke usenubọk ”ahụmahụ gburugburu a menu nke ihe niile m Agbaghara kemgbe ụnyaahụ.
Site n’inwe ekwentị gị dị ka otu n’ime ihe omume ụtụtụ mbụ, ị ji obi gị malite ụbọchị nke onye ọzọ. Enwere onye ozi email iwe site n'aka onye ọrụ ibe m? Kedu maka okwu agbagha na soshal midia? Ma ọ bụ ikekwe ọ bụ akụkọ banyere onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ekwu ihe ọzọ na-enweghị isi nke ga-eme ka ọbara gị sie, na-egbochi mmalite gị na trajectory nke ụbọchị gị karịa njikwa gị. Are na-arụ ọrụ.
Kama nke ahụ, jiri ụtụtụ mee ihe dị ka oghere, mmalite ọhụrụ na-enweghị njedebe. Na-ekpebi ebumnuche gị dịka echiche gị si dị. Otu esi anọdụ ala n'oche ọkwọ ụgbọala.
Dị ka Benjamin Hardy kọwara n'akwụkwọ ya How to Consciously Design Your Ideal Future, “Thezọ kachasị ọsọ iji gaa n'ihu na ndụ bụ ịkwụsị ime. Ọ na-amalite site na ịkwụsị omume ndị na-egbochi gị. ”Ọgbaaghara na-ebute ọgbaghara na usoro na-ebute usoro.
Malite ụbọchị gị site na iji sọọsọ dị mma maka obere uru site na ịkekọrịta akwa ụra gị. Gịnị mere ị ga-eji edozi akwa gị? Dika Admiral William H. McRaven kwuru na okwu mmeghe ya na UT Austin, “Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ụwa bidoro site na ịme akwa gị ga-abụ ọrụ izizi nke ụbọchị ahụ.
Ọ ga-enye gị ntakịrị echiche nke mpako ma gbaa gị ume ịrụ ọrụ ọzọ, na ọzọ, na ọzọ. Na njedebe nke ụbọchị, a ga-arụ otu ọrụ ahụ n'ọtụtụ ọrụ. Ime akwa gị ga-emekwa ka eziokwu ahụ dị ọkụ.
Ihe ndị dị na ndụ dị mkpa. Ọ bụrụ n’anyị enweghị ike imezi ihe pere mpe, ịgaghị enweta nnukwu ihe. Ọ bụrụ na ị nwee ụbọchị nhụjuanya, ị ga-alaghachi n'ụlọ ị dina akwa, nke ahụ bụ ihe ị mere.
Ihe ndina e mere akwa na-enye obi ike na echi ga-aka mma. ”O kwesịghị ịbụ nke zuru okè. Ọ naghị ewe m karịa 60 sekọnd iji mee akwa m na naanị ya na-eme ka m nwee ụlọ mkpọrọ, m ụlọ ime ụlọ m, ebe mara mma karị.
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọrụ ị ga - eme karịa, mee ya naanị izu ole na ole, n'oge na - adịghịkwa anya, ị ga - eche na ọ bụghị nnukwu nsogbu n'ihi na ọ bụghị. Kedu mgbe ị na-agbanwe n'ụtụtụ? , nke ahụ pụtakwara ịwụnye uwe gị ruru unyi na nkata e ji asa ákwà ma dezie ihe ndị ọzọ dị n’ime ime ụlọ ahụ. Ndị asọmpi anaghị eji uwe ha ebido ụbọchị ha, ụlọ ha adịzịkwa aghara.
Ozugbo ị tetere, ị nwere ike iji ụlọ ịsa ahụ na-aga, ị ga-ahụ na mmamịrị gị gbakọtara nke ọma. Jiri ohere a weghachite mmiri, n'ezie mmiri bụ ihe ịchọrọ. Mgbe ị na-ahọrọ kọfị, buru n'uche na caffeine na-egbochi mwepụta nke hormone antidiuretic (ADH), nke na-eduga na diuresis, nke pụtara na akụrụ gị na-ekpochapụ mmiri karịa ka ha na-adịkarị, nke bụ akụkụ akwara iji kpalie onwe gị ịme ụfọdụ omume.
N'ihi nke a, enwere m nnukwu karama mmiri mgbe ọ bụla dị nso n'ihi na nke a ga-ebelata esemokwu iji gbochie mmiri. N’ụzọ ahụ, anaghị m enye onwe m nsogbu ịga na kichin n’ụtụtụ, nara iko ma jupụta ya. Amaara m na ndụ siri ike.
Akụkụ nri bụ nhọrọ ebe a. Nke mbụ, echeghị m na ọ dị mkpa ịnwe ihe ị ga-eri n'ụtụtụ. Onwe m, m na-agbaso ọsọ ọsọ nke 16/8 wee bido windo nri m n'elekere iri na abụọ nke ehihie, ọtụtụ awa mgbe m tetara.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị rie nri ụtụtụ ma ọ bụ nri ụtụtụ, weta bọọlụ ahụ n'ụzọ ziri ezi ka ahịhịa ahịhịa dịka ọka shuga, pọtụf, ma ọ bụ yogọt dị ụtọ. N'ezie, ọ ka mma ịhapụ nri ụtụtụ kpamkpam karịa iri nri ndị a siri ike. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụtakwu banyere sayensị nke njikarịcha nri na oge na-ebu ọnụ, jide n'aka na ị 'denye aha na' isiokwu ahụ na-atụ anya ịhapụ usoro nyocha nyocha anyị n'ọdịnihu dị nso.
Ọ bụrụ na enwere otu agwa m agaghị echefu ruo mgbe 2012, ọ na-eme ka ahụ m na-emegharị kwa ụtụtụ. Amalitere m usoro ịgagharị agagharị na m hụrụ ya n'anya. M buru ụzọ buputa eriri m thoracic na ngwongwo na-akpali akpali nke Trigger Point nke bụ ihe akaebe.
Adighi ike ma adighi nro. Igwe PVC ma ọ bụ ABS dị mma maka ahụ dị ala mana ha anaghị atọ ọchị n'azụ gị, tụkwasa m obi m gbalịrị, na-esote m jiri bọọlụ lacrosse wepụta piriformis na buttocks m wee hapụ usoro mgbatị ọdịnala nke na-arụ ọrụ n'apata ụkwụ m, mgbatị na-agba ụkwụ, aka, azụ, azụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Aga m enwe usoro zuru oke na ọwa m ọzọ.
Achọpụtara m mgbe m na-eme njem a ma na-agbatị usoro kwa ụtụtụ, na-ebili na m nwere ọfụma, nwekwuo ume, ma nwee mmetụta ka mma. Mmetụta ndị a dị mma dị egwu karị mgbe m nwere ụbọchị ogologo n'ime ụlọ ọrụ ịwa ahụ ma ọ bụ n'ụlọ ọgwụ. N'iburu mmetụta na-ebuwanye ibu, mgbe ịmalitere ụbọchị gị site na omume dị mfe ma dị omimi, ọ bụ nzuzu ịghara ime ya kwa ụtụtụ.
Ikwesighi ịgbaso usoro m na-eme, mana ana m akwado ịnwale ụdị mmega ahụ kwa ụtụtụ. Were izu ole na ole chee banyere mmetụta ị na-enwe. Nwere ike ikele m ma emechaa.
Tupu i lee anya na ekwentị gị ma meghachi omume na nsị nke ụmụ enwe a na-atụ ilu na-atụba n'ụzọ gị, were obere oge nọdụ ala ma jiri uche ụfọdụ mee ihe. Maka ụfọdụ ndị, nke a pụtara ntụgharị uche nduzi ịgbaso, maka ndị ọzọ ọ pụtara ịpụ n'èzí na-enweghị ndọpụ ahụ, na maka gị ọ nwere ike ịbụ ihe ọzọ. Maka m ọ bụ Vipassana ntụgharị uche ebe m na-emechi anya m ma chọọ maka 10. elekwasị anya na ume m -15 nkeji Agaghị m abanye na nkọwa niile banyere etu esi etinye uche na mmụọ mgbe niile nwere ike ịbara gị uru n'ọtụtụ ụzọ.
Cheta, ọbụlagodi Tim Ferriss na-ekwu na ihe karịrị 80% nke ndị ọbịa ya nke ndị na-eme ihe nkiri ụwa na-amalite ụbọchị ha site n'ụdị ụfọdụ nke uche mgbe ha malitere omume ha. Ọdịda? Echeghị m otu ahụ. N'ikpeazụ, mụta iche echiche ma tọọ ebumnuche gị maka ụbọchị ahụ.
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-achọ ijikọ nke a na ntụgharị uche uche, nke bụ atụmatụ zuru oke zuru oke. Nke a nwere ike ịgụnye omume iji anya nke uche gị na-ahụ ihe ị na-ele anya ma emechaa ụbọchị ahụ. Ọ masịrị m iji ngwa edetu, Day One, nke ga-echetara m na ngosi ma jupụta na mpempe akwụkwọ omenala nke m na-ejupụta kwa ụtụtụ.
Ndepụta ụtụtụ a gụnyere ide banyere ekele atọ, ihe mgbaru ọsọ atọ ogologo oge, ebumnuche nke taa, na nkwenye iji nyere m aka itinye onwe m ma bido ụbọchị na atụmatụ. Ebumnuche atọ maka ụbọchị na-enyere m aka ịmatakwu ihe m ga-eme n'ụbọchị ma chetara onwe m na ime ihe atọ a karịa ihe m rụzuru ga-abụ mmeri taa na otu ọ ga - esi dị iche, mana ị na - eme obere ihe ịga nke ọma dị mkpa. Oge ụfọdụ ebum n’uche m atọm anaghị arụ ọrụ, dịka ụbọchị ezumike ma ọ bụ ụbọchị mgbe m na-achọ ịchụpụ na izuike.
Ọ bụ ụzọ dị ike iji mee ka akụkọ ahụ pụọ na iko na-enweghị ihe ọ bụla na iko zuru ezu. Ihe ndị a niile Ọ na-ewe otu elekere iji webata usoro m ugbu a. Ọ bụrụ na nke a niile yiri ka ọ karịrị akarị, nke ahụ zuru oke.
Gbalịa ịgbakwunye ma ọ bụ gbanwee otu ihe n'otu oge, ọ bụghị n'otu oge, ma nwalee onwe gị. Mgbe ihe karịrị afọ 10 nke ụtụtụ na-eme nke ọma, achọpụtara m na ndị a bụ isi ihe dị mkpa maka usoro ụtụtụ, mana mee ka m mara na ọ bụrụ na nke gị dị iche! Abịa na itinye ụdị mgbanwe ọ bụla bara uru na ndụ gị, ọ dị mkpa ịnweta sistemụ na usoro ziri ezi iji kwado mgbanwe omume ndị a. Ọ bụ ya mere m ji hụ Notion n'anya.
Echiche bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na-akpali akpali ndetu-ewere ngwa ọdịnala ma na-na-arụpụtaghị na mmụta ụwa site oké ifufe. Ọbụghị naanị na ọ bụ ngwa dị ike na na-agbanwe edetu ngwa ngwa, mana usoro ya na-agbanwe yana njirimara onye ọrụ ya dị ọcha na-eme ya ọ joyụ iji gafee ọtụtụ ngalaba. M na-eji ya kwa ụbọchị iji jikwaa ndị otu m na Med School Insiders, ma ọ dochiela Evernote dịka ngwa m na-eji ahazi ndụ m.
Nwere ike ịmepụta listi ịmekọrịta, kalenda ma ọ bụ onye nhazi ihe mgbakwunye nwere ike ịgbakwunye, ma ọ bụ ọbụna were ndetu na klaasị site na elele nke ncheta na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye usoro iji họrọ usoro nke ụtụtụ nke gị, Nkọwa nwere ike inye aka na nke ahụ Ọzọkwa. Enwere ihe kpatara mụ na ọtụtụ ndị ọzọ jiri ọdịnaya masịrị Echiche. Ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, enweghị ihe kpatara ya, ọ bụ n'efu maka ụmụ akwụkwọ ndị debanyere adreesị ozi-e ziri ezi .edu.
Pịa njikọ na nkọwa dị n'okpuru iji bido taa. Daalụ maka ikiri. Ọ bụrụ n’edemede a masịrị gị, biko hapụ anyị isi mkpịsị aka iji mee ka chi YouTube nwe obi ụtọ.
Denye aha na ọdịnaya ndị ọzọ dị ka nke a ma kụọ mgbịrịgba ngosi maka gị Echefula bulite. A hụrụ gị niile n'anya nke ukwuu, anyị ga-ahụkwa gị oge ọzọ.
Mmegandị riri ahụ na-eche na aabụọ-aka elekereọsọ na-eme ka ha dị mma okpukpu anọ. Ọ naghị arụ ọrụ ahụ.Imega ahụ gabiga ókènwere ike iduga mmerụ ahụ, ike ọgwụgwụ, ịda mba, na igbu onwe. Ọ nwekwara ike ịkpata mmerụ ahụ na-adịgide adịgide.June 1. 2007 afọ
Mmega ga-adị mma maka gị. O nwere ike inyere gị aka ịnọgide na-enwe ahụ ike, meziwanye ahụike gị, na ọbụna lụso ịda mbà n'obi ọgụ. Mana dị ka ọ dị n'ọtụtụ ihe, enwere ike ịgabiga ya ọ nwere ike ibute nsonaazụ maka ahụ gị na ụbụrụ gị.
Yabụ kedu mgbatị ahụ gabigara ókè? N’ezie, ọ dabere n’ihe ndị dị ka afọ ndụ gị, ahụike gị, na ụdị mmega ahụ ị na-ahọrọ. Mana n'ozuzu, ndị toro eto kwesịrị ịdị na-emega ahụ ihe dị ka awa ise n'izu, ma ọ bụ awa abụọ na ọkara ma ọ bụ karịa nke arụmọrụ siri ike, ma ọ bụ nchikota ha abụọ, dị ka CDC si kwuo. Ma nnyocha na-egosi na ime ihe karịrị nke ahụ anaghị eme ka uru ahụike gị dịkwuo elu Nnyocha a na-atụghị anya ya chọpụtara na ndị na-agba ọsọ na-agafe agafe nwere ihe ize ndụ nke ọnwụ karịa ndị na-adịghị emega ahụ.
N’ụzọ dị ịtụnanya, ụfọdụ ndị gbara ọsọ ọsọ ọsọ karịa ugboro atọ n’izu nwere ihe egwu yiri nke ọnwụ na ahụ ike nke ndị na-abụghị ndị ọgba ọsọ site na ịgba ọsọ oge niile. Nnukwu ntachi obi dị ka ultramarathons nwekwara ike ịkpata mmebi obi, obi mgbawa oge ụfọdụ, yana nnukwu akwara na ụfọdụ ndị. Ndị ọkachamara kwenyere na ntachi obi dị ukwuu na-eme ka usoro obi obi dị oke mkpa.
Otu nnyocha gosiri na imega ahụ́ gabigara ókè nwere ike ịgbanwe obi, mee ka mgbidi akwara buru ibu, meekwa ka ebe mmadụ mebisịrị ahụ. Nnyocha ọzọ gosiri na ụmụ nwanyị anaghị enwekarị nkụchi obi ma ọ bụ ọrịa strok ma ọ bụrụ na ha na-emega ahụ dịkarịa ala otu ugbo n’izu. Mana ihe egwu ahụ nke nkụchi obi na ọrịa strok amụbaala na mmega ahụ siri ike maka ụmụ nwanyị kwa ụbọchị.
Yabụ enweghị uru dị na mmega ahụ gabiga oke karịa mmega ahụ na-agabigaghị oke, ọ nwere ike bụrụ ihe egwu karịa. Womenmụ nwanyị na-ekpughere otu ihe egwu maka ndị a na-akpọ 'Female Athlete Triad'. Ndị a gụnyere ịhụ nsọ, ịhụ nsọ, ịkpụkpụkpụ azụ ma ọ bụ ọkpụkpụ ịkpụkpụ, na nsogbu iri nri.
Ihe mgbaàmà ndị a na-abụkarị nchikota nke mgbochi na calorie mgbochi dị ka ịbelata libido, nke ga-ekwe omume n'ihi ike ọgwụgwụ anụ ahụ, na iweda ogo testosterone. Maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ịuseụbiga mmanya ókè na-eme ka ohere nke ị injuriesụbiga mmerụ ahụ dị ka tendonitis na mgbawa ike ọgwụgwụ. Ihe ọjọọ ndị a na-esi na trauma ugboro ugboro.
Usoro mgbochi gị nwere ike ịta ahụhụ. Ọ bụ ezie na imega ahụ́ n’ụzọ kwesịrị ekwesị pụrụ ime ka usoro ahụ́ gị ji alụso ọrịa ọgụ dịkwuo mma, imega ahụ́ n’ụzọ gabigara ókè pụrụ ọbụna igbochi ya. Mgbe mmega ahụ siri ike, enwere ihe dị ka awa iri asaa na abụọ mepere emepe maka imebi emebi.
N’ikpeazụ, nke a pụtara na nje na nje nwere ike ịba ngwa ngwa ibunye ahụ mmadụ. Ndị na-eme egwuregwu na-emega ahụ gabigara oke ahụrụkwa ọrịa na-efe efe karị. Ya mere, anyị maara na mmega ahụ gabigara ókè nwere ike ịnwe mmetụta dị egwu n'ahụ gị, ọkachasị obi gị, akwara, akwara, na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Ihe dị ka otu nde mmadụ na US, ị addictionụ egwuregwu na-emebi ụbụrụ ha. Mgbaàmà nke iri ahụ mmega gụnyere iwepụ. Ọ bụ mgbe ahụ ka ị na-echegbu onwe gị ma ọ bụ na ike gwụrụ gị maka ịhapụ mgbatị ahụ.
Ma ọ bụ enweghị njikwa na enweghị ike ibelata ọzụzụ ọbụna mgbe ị maara na ọ ga-ewute gị. Ugbu a ihe dị mkpa ịghọta bụ na ị gaghị akwụsị ịkwụsị mmega ahụ. Isi ihe bụ iji nweta ego kwesịrị ekwesị.
Ya mere, nweere onwe gị, gaa n'ihu ma gbaa ọsọ! Naanị oge niile.
Ọ dị njọ imega ahụ kwa ụbọchị?
Dị ka ihe mgbaru ọsọ zuru ezu, chọọ ma ọ dịkarịa ala minit 30 iji megaa ahụkwa ụbọchị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ifelata, jigide ọnwụ ma ọ bụ izute ebumnuche ahụike, ọ nwere ike ịdị mkpammega ahụỌzọ.
Iga ije dị ka mmega ahụ zuru ezu?
Dị ka NHS si kwuo, ndị okenye kwesịrị ịdị na-eme 'opekata mpe nkeji iri ise na otu arụ ọrụ ike kwa izu'.Na-eje ijea na-atụle kwa izu ammega ahụmgbaru ọsọ, na pụrụ inyere gị aka iru ume na mma obi na obi - ma ị ga-agba mbọ hụ na ị na-aga na a 'brisk' ijeụkwụ.
Walk ji ụkwụ gaa nkeji iri atọ?
NaanịNkeji 30ụbọchị ọ bụla nwere ike ime ka ahụike obi dịkwuo ike, mee ka ọkpụkpụ dị ike, belata oke abụba, ma bulie ike akwara na ntachi obi. O nwekwara ike belata ihe ize ndụ gị nke ibute ọrịa dịka ọrịa obi, pịnye ụdị ọrịa shuga abụọ, ọrịa ogbu na nkwonkwo na ụfọdụ ọrịa kansa.
M ga-efufu ibu na-egosipụta minit 30 kwa ụbọchị?
Ndị ọrụ nyocha chọpụtara na ụmụ nwoke dara oke ibu na-emega ahụ ike ọsụsọNkeji 30 kwa ụbọchịefunahụ nkezi nke 8 pound karịrị ọnwa atọ ma e jiri ya tụnyere nkeziọnwụ ọnwụnke 6 pound n'etiti ndị rụụrụ ọrụ maka 60nkeji otu ụbọchị. Ọnwụ zuru oke nke oke ahụ bụ otu maka otu abụọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 9 pound.Ọgọst 24 2012
Gịnị bụ isi sekpụ ntị na-ebi ndụ adịghị arụ ọrụ?
Ịnọ nkịtịụdị ndụ na-agbasa n'ụwa niile n'ihi enweghị oghere maka mmega ahụ, ọrụ kawanye njọịnọkarị otuakparamàgwà dịka ọrụ ọfịs, na ịbanyewanye na telivishọn na ngwaọrụ vidiyo. N'ihi ya, nsogbu ahụike metụtara metụtara na-arịwanye elu.19 nke 2020bọchị 2020
Kedu ihe atụ 3 nke ịrụsi ọrụ ike?
Ihe atụ nke ikearuihe omumegunyere: igba oso (5 mph>), igwu mmiri, shọvelụ, bọọlụ, ịwụli eriri, ebu ibu dị arọ (yabụ brik).Dec 19 2018
Exercisedị mmega ahụ dị a shouldaa ka m kwesịrị ime n’izu?
Maka ọtụtụ ndị toro eto ahụike, Ngalaba Ahụike na Ọrụ Ndị Ọrụ na-atụ aro ụkpụrụ nduzi ndị a: Ọrụ aerobic. Nwee ọ dịkarịa ala minit 150 nke arụ ọrụ ikuku na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ nkeji 75 nke mmega ahụ siri ike kwa izu, ma ọ bụ ihe ejiri agagharị na ịgbasi ike. Ọzụzụ ike.
Olee ụdị mmega ahụ́ m kwesịrị ime iji nwee ahụ ike?
Iji gbasie ike, ndị toro eto dị afọ 19 ruo 64 kwesịrị ịgbalị ịdị na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị ma kwesịrị ime: ọ dịkarịa ala minit 150 nke arụ ọrụ aerobic dị ka ịgba igwe ma ọ bụ ije ije kwa izu na. mmega ahụ ike na ụbọchị 2 ma ọ bụ karịa n’izu ụka nke na - arụ ọrụ niile akwara (ụkwụ, hips, azụ, afọ, obi, ubu na ogwe aka)
Ugboro ole ka ị kwesịrị ịdị na-emega ahụ́ n’ụbọchị?
zubere ịdị na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị. Omume ọ bụla dị mma karịa enweghị nke ọ bụla, ma nwekwaa nke ka mma belata oge ejiri nọrọ ọdụ ma ọ bụ dinara ala ma gbajie ogologo oge na ịgaghị agagharị na ọrụ ụfọdụ. Nwere ike ịme mgbatị ahụ kwa izu kwa ụbọchị ma ọ bụ karịa 2 ma ọ bụ karịa ụbọchị. Ihe ọ bụla masịrị gị.